Ndakaridza kamhere apa beche richitsemukira mboro yavo ichinyura zvisina tsitsi - Masasi eHarare
DzeBonde Ndakaridza kamhere apa beche richitsemukira mboro yavo ichinyura zvisina tsitsi
Ndakaridza kamhere apa beche richitsemukira mboro yavo ichinyura zvisina tsitsi.
Vakati wava kutoshanda usati wandipa makumbo akatsvuka kunge fanta akadai ndikati
makambokumbira here mukanyimwa. Takaseka tese nekuti ndiwo mutambiro wacho wataiyita mazuva ose. Vakauya vakagara pedyo neni zvikanzi nhasi ndinokukwira chete ndikati mari yenyu chete. Chiramu change choenda kure apa sekuru vainge vasingatambe.
Vakatanga kundidhonza mazamu ndichibva ndatiza ndoenda kukitchen kutsvaga drink
mufridge. Iwe masasi baba vakateverawo vachindibata magaro nekugumisa mboro yavo pandiri. Aika imi babamukuru nyarai mhani. Zvikanzi mboro inonyara here. Ndipe makumbo chete.
Ndakavharirwa mucorner kwava kubatwa batwa kunge tabvumirana apa ndainge
ndofemera pamusoro ko ndaigoitawo sei ndiri munhu zeno rinotobatawo. Pfungwa dzangu dzakandirambira kubviswa humhandara nedhara risina kumbondipfimba. Imi baba mukuru this is not good. Vakaramba vakanyarara ndokupinza mawoko muskirt ndokutanga kupuruzira beche rangu vachibva vabvisa pant rangu apa muviri wese wainge wapera simba. Vakatanga kudhonza matinji angu apa kiss iri tii pamuromo. Ko ndaizodiniwo.
Ndakadhonzerwa musitting room apa ruoko rwavo rwuchitambisa beche inini ndatotesa kare. Mboro nyoro ndiye pamuromo pebeche. Ndakaridza kamhere apa beche richitsemukira mboro yavo ichinyura zvisina tsitsi. Mudhara akasvira pacarpet zvisina tsitsi. Mboro yavo yaisvika pamoyo chaipo. Ndakambofenta kwekanguva ndikamuka vachingokwesha chete. Imi mboro inonaka zvikuru hombe ine anogona kuishandisa. Ndakanzwa kupindwa netumvura tunopisa apo yanga yorutsa nemboro. I lost my mind there. Rakati kubvira nhasi ndichakuitira twese twaunoda uchindipawo mhata. Haaa imi
ndokukwirwa first time kupiwa nhumbu nokuitwa small house na baba mukuru. Mazuva ano vanongouya vachisvira ndakabatirira. Ndongadii ivo vachigona kusvira kwacho. Tete havazivi kuti mwana mukomana wavaida ndiye wavari kuchengeta ndewa baba mukuru.
Mudhara andichepesa nemboro kani.
kusvirwa nababa mukuru